Mascarpone iyo keega isbuunyada liin | Bezzia
Ilaa hadda, kuma aannu darin farmaajo mascarpone mid ka mid ah Bezzia's buskudkayaga Bal eeg waxaan buskud ka samaysannay! Natiijadu aad ayay nooga yaabisay. Dhab ahaantii, tani mascarpone iyo keega liin Waa mid ka mid ah kuwa ugu jilicsan uguna qallafsan ee aan diyaarinay.
Keegani waa sidaas jilicsan oo jilicsan kaligii la cunaa Waxaad u adeegi kartaa macmacaan ahaan hadda xagaaga adigoo isticmaalaya qaado jalaato ah laakiin waxaad sidoo kale ku raaxaysan kartaa quraacda ama cunto fudud oo leh koob kafee ah oo dhinac ah. Had iyo jeer waxay ahaan doontaa wakhti fiican inaad ilkahaaga quusto.
Haddii isku-dhafka maaddooyinka iyo dhogorta horeba aad ku qanacsan tahay, markaad ogaato sida ay u fududahay in la sameeyo Waxaan hubnaa in lagugu dhiirigelin doono inaad tijaabiso. Waxayna tahay in buskudyadani ay ka mid yihiin kuwa ay tahay inaad wax yar ka qabato inta aad isku qasayso dhammaan maaddooyinka oo aad foornada u qaaddo. Diyaarso maaddooyinka oo u tag!
80 g. sonkor ah
Casiirka iyo xabo ee hal liin
70 ml. saliid gabbaldayaha
180 g. boorash
1 xirmo oo khamiir kiimikaad ah
Sii kululee foornada 180ºC oo leh kuleyl kor iyo hoos.
Ulaha gacanta ku qas farmaajo mascarpone baaquli, sonkor, xabo iyo liin.
Marka dhammaan maaddooyinka la isku daro Sidoo kale ku dar ukunta. iyo saliidda oo isku qas ilaa tiro isku mid ah laga helayo.
Dhammaad, ku dar boorashka iyo khamiirka oo isku qas ilaa la isku daro.
Dufan caaryada ama ku dheji warqad xaashida ah oo ku shub cajiinka.
U qaad foornada oo kari ilaa 50 daqiiqo ilaa inta ay ka curdan tahay oo waxoogaa dahab ah ay ka noqoto. Ma browning aad u badan? Si aad uga hortagto inay gubato 45 daqiiqo ka dib, ku rid foornada aluminium ee keega haddii loo baahdo.
Marka keega la sameeyo, ka soo saar foornada oo sug 10 daqiiqo ilaa ka soo saar rashka.
U ogolow inay qaboojiso oo ku raaxayso keega isbuunyada mascarpone liin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » Postres » Mascarpone iyo keega liin